မိုးရွာချိန်ဆို ဖီးလ်လို့ကောင်းမယ့် နိုင်ငံတကာကသီချင်းတွေ
12 Jun 2019 . 11:14 AM
ရထားဥသြဆွဲသံတေကြားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် မိုးရွာတဲ့အချိန်တွေဆို ဘာကိုလွမ်းလို့ လွမ်းမှန်းမသိတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုဖီးလ်လို့လွမ်းလို့ကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အခရာက ပြောပြပေးမယ့် ဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရာသီဥတုနဲ့အတူ လိုက်ပါစီးမျောလို့ကောင်းမှာ အသေအချာပါပဲ။
ဒီသီချင်းကတော့ “မိုးစက်ကလေးများ ခေါင်းပေါ်မှာ” ဆိုပြီး မြန်မာသီချင်းတောင် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီသီချင်းကိုဆိုခဲ့တဲ့ BJ Thomas က ၁၉၆၀ နဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။ Raindrops Keep Falling On My Head က သူ့သီချင်းတွေထဲမှာမှ နာမည်အကြီးဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
Rain – Lim Kim
ဒီသီချင်းကတော့ ကိုရီးယားသီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ မိုးရွာချိန်မှာ ဖွင့်ထားလိုက်ရင် အတော်လေး နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ပြောမနေတော့ဘူး။ ဖွင့်သာကြည့်လိုက်တော့။
If it is for you – The Overtunes
ဒီသီချင်းကိုသီဆိုတဲ့ Band ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ကောင်လေး (၃)ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ဒီသီချင်း အစကတော့ ဂစ်တာသံချိုချိုလေးတွေနဲ့ စထားတာပါ။ Acoustic သီချင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အသံကောင်း၊ မကောင်းနဲ့ သီချင်းအနေအထားကို သိချင်ရင်တော့ ဗီဒီယိုကို ရှိုးလိုက်တော့။
ဒီသီချင်းက ၁၉၃၉ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ The Wizard of Oz ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ အကောင်းဆုံးမူရင်းသီချင်းအဖြစ် Academy Award ရခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းဟာ ဒီထဲက ဇာတ်လိုက်မင်းသမီး Judy Garland ရဲ့ Signature သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Only One Who Knows – Arctic Monkeys
ဒီသီချင်းရဲ့အဝင်မှာကတည်းက အဆွေးတလိုင်း ခံစားရမှာပါ။ Arctic Monkeys ရဲ့ အကြောင်းနဲ့ သူတို့သီချင်းတွေကိုတော့ အထူးတလည် ပြောပြနေဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။
Papa Paname – Vanessa Paradis
“By bike I remember I was walking down the alleyways
I was immortal because you gave me wings” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဒီသီချင်းကတော့ ပြင်သစ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခရာက ပရိသတ်ကြီးအတွက် မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာ နားထောင်လို့ကောင်းမယ့် ပြင်သစ်သီချင်းတွေဆိုပြီး Google ခေါက်ကြည့်တော့ ဒီသီချင်းလေး သွားတွေ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ A Monster in Paris ကာတွန်းကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုးရွာတဲ့နေ့လေးမှာ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေကိုနားထောင်ပြီး ဖီးလ်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်စေ၊ နားထောင်နေကျသီချင်းတွေထဲကနေ ကွဲထွက်ပြီးတော့ အဆန်းအပြားလေးတွေကို နားထောာင်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ တစ်ခါနားထောာင်ပြီးရင် ဒီသီချင်းလေးတွေကို ပြန်ပြန်ပြီးနားထောာင်ချင်မှာ အသေအချာပါပဲ။ဒီသီချင်းတွေမှ မဟုတ်ဘဲ ပရိသတ်ကြီးနားထောင်နေကျ သီချင်းကောင်းကောင်းလေတွရှိရင်လည်း ပြောခဲ့ပေးဦးနော်။
Reference : theodysseyonline.com, axs.com
Michael Jackson သီချင်းများဆီသို့ တမ်းခြင်း
by Ngul Ciin . 13 mins ago
ကျောင်းတွေမှာ နောက်ပိုင်းတွေ့မြင်ရဖို့ မလွယ်ကူတော့တဲ့ အရာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ
နေ့ခင်းဘက် တစ်ရေးတစ်မောအိပ်ရင် ဘယ်နှနာရီလောက်ပဲ အိပ်သင့်လဲ
by Naw Hsel Hte . 23 hours ago
by Moethae Say . 1 day ago
Michael B Jordan ကို Matrix မှာ ဇာတ်ဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာလား
Mid Range ဖုန်းတွေအတွက် မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ MediaTek Helio P65 Processor
ငယ်ဘဝကို အမှတ်ရစေပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့ 90 ဝန်းကျင် အငွေ့သက်တွေကို ခံစားသွားရစေမယ့် Blazing Chrome